Eto Madagasikara anefa dia mponina 8 tapitrisa no tsy manana fitaovam-panasan-tanana amin’ny savony any an-tokan-tranony. Izany indrindra no nanosika ny UNICEF hiara-kiasa tamin’ny JIRAMA. Ny Ministeran’ny Rano, Fidiovana ary Fanadiovana, etsy andaniny, dia mikendry ny hanatsarana ny tahan’ny fisitrahana rano fisotro madio manerana ireo distrika 119 ato amintsika Ho fanamafisana ny famatsian-drano amin’ireo faritra manana olana amin’izany dia hiroso amin’ny fametrahanany WSP na « Water Service Point by JIRAMA », tohanan’ny UNICEF ny roa tonta. Fokontany31 eto Antananarivo no hiaraha-manatanteraka izany.Siniben-drano miisa 40, manana hadiry hatramin’ny 10m3no haparitaka ao anatin’ny fametrahana ity tolotra ity. Hisy ihany koa ny fanentanana amin’ny fihetsika fototra ho fiarovana amin’ny coronavirus hiaraha-manatanteraka amin’ny fokontany 192 eto Antananarivo, izay ahitana paompy miisa 2660 sy Fokontany 138 any Toamasina izay misy paompy 377. Ity tolotra ity dia hitondra vahaolana azo tsapain-tanana ho an’ny mponina amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao satria sady hahafahan’izy ireo misitraka rano fisotro madio no hisitrahany fanasan-tanana ihany koa. . .Paikady izay mifototra amin’ny fanitarana ireo toby famokaran-drano, ny fitsinjarana izany ary ny fampidiran-drano vaovao, izay hiaraha-miasa akaiky amin’ny JIRAMA. Eo ihany koa ny fametrahana foto-drafitrasa fidiovana sy fanadiovana izay iarahany manatanteraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Raha ny vinavina dia olona 470 000 eto Antananarivo ary 30 000 any Toamasina no manjifa ny rano amin’ny paompy.